एक बेसबल ब्याटिङ कसरी चयन र mitten गर्न? त्यहाँ एक गियर चयन गर्न केही रहस्य छन्। यसको पेश्की मा बेसबल को खेल को लागि एक सुविधाजनक र कुशल उपकरण को निपटान मा प्राप्त हुनेछ केही कुराहरू प्रकट गर्छ।
एक बेसबल कसरी चयन गर्ने?
सामान स्टोर sporting भ्रमण, पहिलो कुरा सबै बलमा देखाउन विक्रेता सोध्नु हो। तिनीहरूलाई प्रत्येक आफ्नो हातमा फेंक केही समय होल्ड गर्न सिफारिस गरिएको र एक कठिन सतह थिच्नुहोस्। गुणस्तरीय राम्रो पर्याप्त बल प्रभावशाली वजन छ र बाक्लो सामाग्री गरे। तपाईं उत्पादन कृत्रिम छाला वा अन्य कृत्रिम आधार बनाइएको छ याद भने, यो प्राथमिकता दिन छैन।
बेसबल बुझ्न, तपाईं हटा गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूले एक कठिन सतह मा धेरै पटक दस्तक गर्न आवश्यक छ। उत्पादन गुणस्तर भने, यो यस्तो कार्य पछि संरचना परिवर्तन गर्दैन। सतहमा निशाना र खरोंच पज दिनुपर्छ।
विशेष महत्व रंग बेसबल चित्रित छ जो डिग्री छ। धुलो खेल्दै, तपाईं शरीर को दिशा मा मक्खी जो उत्पादन, देख्न सक्नुहुन्छ। उच्च गति बेसबल यसको प्रभावशाली वजन चोट परिणामस्वरूप संग मिलेर।
सामान्यतया स्वीकार स्तर अनुसार, यी उत्पादनहरु जो तिनीहरूलाई हरियो, घाँसदार क्षेत्र को पृष्ठभूमिमा देखिने बनाउँछ, सेतो चित्रित छन्। हालै बजार मोडेल मा देखा, एक विशेष फ्लोरोसेन्ट पदार्थ ढाकिएको। यो बेसबल दिन को समयमा प्रकाश अवशोषित र राति glows। यो सम्भव पनि पर्याप्त उच्च गुणवत्ता प्रकाश धुलो र खेल रमाइलो बनाउँछ।
एक बेसबल कति गर्छ? यस्तो प्राविधिक हालतमा खरिद गर्न स्थानीय खेल सामान स्टोर रूपमा प्रति एकाइ 450-470 rubles रूपमा कम हुन सक्छ।
एक ब्याटिङ छनौट
एक बेसबल खेलको लागि एक ब्याटिङ लिँदै, ध्यान सामाग्री निर्माण गर्न भुक्तानी गर्नुपर्छ। हाल, गन्तव्य उत्पादनहरु विभिन्न तरिकामा बाहिर छन्:
एल्यूमीनियम। सामाग्री देखि बिट सम्भव, बल को उडान थप चाँडै प्रतिक्रिया यस्तो projectile को पूर्ण नियन्त्रण महसुस जो एक कम वजन, छ। काठ तुलनामा crumble छैन सामाग्री, दरार छैन र आधा मा तोड छैन।
खरानी - आज बजेट को थोक एक बिट बनाइएको काठ को। किनभने यसको कम लागत को प्राथमिक सामाग्री, प्रशोधन सजिलो, एक कठोर संरचना, साना वजन। मात्र drawback को अपेक्षाकृत कम बल हो।
मेपल। बाट निर्मित भएको बिट सामाग्री को खरानी संग तुलना धेरै बलियो छ भन्नुभयो। लामो समय को लागि तिनीहरूले खेलको प्रभावकारिता देखाउन पनि भारी थिए। तथापि, सुकाउने काठ को नवीनतम प्रविधि एकदम यस्तो उत्पादनहरु को वजन कम गर्नेछ।
बर्च - सामाग्री मेपल रूपमा कडा रूपमा छ र स्पष्ट जस्तै अलग छैन। सन्टी देखि बिट कठोरता को एक उच्च स्तर अधिकार र एकै समयमा अपेक्षाकृत लचिलो छन्।
बेसबल पन्जा छनौट लागि सुझाव
त्यसैले हामी बेसबल ब्याट र बल के हुनुपर्छ बाहिर फेला परेन। अब हामी विशेष पन्जा को चयन को प्रश्न गर्न बारी। अघिल्लो अवस्थामा रूपमा यहाँ प्राथमिकता सामाग्री उत्पादन गर्न दिनुपर्छ। सबै को सबै भन्दा राम्रो, यदि mitten साँचो छाला बनेको छ। सबै seams फर्मवेयर बाक्लो, टिकाउ सूत्रहरू हुनुपर्छ।
यसलाई आफ्नै हात अन्तर्गत बेसबल पन्जा को आकार चयन गर्न imperative छ। त्यहाँ सेटिङ समायोजन गर्न फास्टनरों हो जसमा मोडेल छन्। तथापि, उत्पादनहरु को यस श्रेणी एक गम्भीर स्तर प्ले लागि उपयुक्त, र केवल प्रशिक्षण लागि उपयुक्त छ। तर, यी पन्जा बच्चाहरु को लागि उपयुक्त हो। यहाँ आकार परिवर्तन Velcro वा तस्मा प्रयोग हुन सक्छ।
कस्तो बेसबल mitten बाँया-hander लागि चयन भने? हामी यो मामला मा, उत्पादन को औंठी बायाँ छेउमा स्थित पर्छ भनेर सम्झना गर्नुपर्छ।
तपाईं mitten लागि पैसा दिन अघि, त्यहाँ बल फेंक केही मिनेट सिफारिस गरिएको। परीक्षण बेचैनी पैदा हुँदैन। यो एक राम्रो साइन छैन - बल पनि छ भने यसको स्वागत मा पाम "महसुस"। यो अवस्थामा यसलाई denser सामाग्री बनेको पन्जा प्राथमिकता दिन राम्रो छ।
बेसबल को खेल अनुयायी संख्या हाम्रो देशमा हरेक वर्ष बढ्दै छ। देख्न सकिन्छ रूपमा, यस्तो खेल मा संलग्न उपकरण को एक आधारभूत सेट आवश्यक छ। राम्रो बारूद कसरी चयन गर्ने? यसो गर्न, तपाईं माथि सिफारिसहरू ध्यान र व्यक्तिगत प्राथमिकताहरू द्वारा निर्देशित गर्नुपर्छ।
अमेरिकी आक्रमण राइफल राइफल M4: फोटो र हतियार को विशेषताहरु
Sniper "दस्ता।" राइफल्स आक्रमण राइफल "वैल"
टेनिस लागि रकेट कसरी चयन गर्ने? सिफारिसहरू
'Bishofit' - सम्पूर्ण जीव को रिकभरी लागि जेल
WPE प्रो कसरी प्रयोग गर्ने
के वा जो एक सेन्ट हुन सक्छ? objectively हेर्न
आदेश मा Theses
स्वादिष्ट र crunchy ककडी "Nizhyn": चरण नुस्खा द्वारा चरण
ऊफा नदी: राफ्टिंग, माछा मार्ने, परिभ्रमण
Banded न्यूट: amphibious उपस्थिति, जीवन span, वासस्थानमा, रोचक तथ्य
"सैमसंग ट्याब 4" को समीक्षा। ट्याबलेट: विशेषताहरू, समीक्षाहरू, लागत
कसरी सलाद Bavarian तयार?
कीमा बनाएको मासु संग भरी टमाटर - एक, सुन्दर स्वादिष्ट र द्रुत भोजन!